देश Archives - खबरदार न्युज
July 30, 2021 AdministerLeaveaComment on पक्राउ परेका पारस शाह प्रहरी चौकी नपुग्दै बिच बाटो बाटै छुटे: माथिको आदेश भन्दै छोडियो…कसले छुटायो त यो हेर्नुस।
काठमाडौ, पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरीमाथि अ’भ’द्र व्य’व’हा’र गरेका छन्। शुक्रबार साँझ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा शाहले प्रहरीलाई यस्तो गरेका हुन्। हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकलमा सवार शाहलाई प्रहरीले समातेको थियो। पारसले त्यसक्रममा प्रहरीलाई ध’म्की’पूर्ण शैलीमा छोड्न भनिरहेको सार्वजनिक भएको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ। शुक्रबार साँझ काठमाडौंको महाराजगञ्ज चोकमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीसँग उनी वा’दवि’वादमा उत्रिएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी […]
गाउँमा पानि आउला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ – लकान्द्र गाउँको कथा ।
June 29, 2021 June 30, 2021 AdministerLeaveaComment on गाउँमा पानि आउला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ – लकान्द्र गाउँको कथा ।
महेश जैसी। तुर्माखाँद अछाम, नेपाल सरकार,फिनल्यान्ड सरकार र तुर्माखाँद गाउँपालिका को आर्थिक सहयोगमा संचालित ग्रामीण जलस्रोत ब्यावस्थापन परियोजना (RVWRMP) तथा सहयोगी संस्था रुडेक नेपालको सहजीकरण रहेको अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका वार्ड नं. ३ अन्तर्गत संचालित सेलगाडी-लकान्द्र सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ले लकान्द्र बासिको बर्षौँ देखिको सपना पूरा गरिदिएको छ। ८६२ मिटर तलको मुहानबाट सोलार […]
हेर्दाहेर्दै यसरी भाँसियो जमिन, गाउँ नै सखाप ! सक्दो सेयर गर्नुहोला। (भिडियो सहित)
June 25, 2021 June 25, 2021 AdministerLeaveaComment on हेर्दाहेर्दै यसरी भाँसियो जमिन, गाउँ नै सखाप ! सक्दो सेयर गर्नुहोला। (भिडियो सहित)
काठमाडौ, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५, शिख स्वभिताका ज्ञान बहादुर पुनको घर मुनीको जमिन धाँजा फाटेर चिराचिरा परेको छ। भिरालो पाखोमा अवस्थित पुनको घरको आगन नै चर्किएपछि घर बगाउने हो कि भन्ने डरले सुरक्षित ठाउँमा गए । स्वभिता र धस्केखरे गाउँमा माथिबाट र तलबाट दर्जनौ ठाउँमा जमिनमा धाँजा फाटेको छ । विपत्तीका कारण घर छोडेर हिडेका केही […]
June 24, 2021 June 24, 2021 AdministerLeaveaComment on काङ्ग्रेस सभापति देउवा नेपाली राजनीतिको बादसाह सावित ! औलामा नचाइदिए ओलि,नेपाल र प्रचण्ड लाइ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरहादुर देउवाले अब आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने बताएका छन् । भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट शनिबार सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँगको कुराकानीमा उक्त कुरा बताएका हुन् । देउवाको भनाई तात्पर्य उनी पुनः सभापतिमा दोहोरिने चाहेका छन् । र, त्यहीँ छलफल गर्न […]
राम्रो काम गर्न खोज्दा सर्बोच्चले धोका दियो – अब म राजिनामा दिन्छुँ: प्रधानमन्त्री केपि ओलि ।
June 23, 2021 June 23, 2021 AdministerLeaveaComment on राम्रो काम गर्न खोज्दा सर्बोच्चले धोका दियो – अब म राजिनामा दिन्छुँ: प्रधानमन्त्री केपि ओलि ।
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आ’क्रोश व्यक्त गर्दै सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा दु ख दिने गरेको आ’रोप लगाएका छन् । अब अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्न सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् मंगलबार २० जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतप्रति आ’क्रो’शित बनेका हुन् […]
June 21, 2021 June 21, 2021 AdministerLeaveaComment on कहाँ बाट आउछ ज्ञानेन्द्र शाहीसंग यत्रो पैसा? ५० लाखको कार छोडेर करोडौँको हेलिकप्टर किन्दै! सेयर गर्नुहोला।
काठमाडौ, पछिल्लो केहि समयदेखि सामाजिक संजालमा आलोचनाको पात्र बन्ने व्यक्तिहरु बाध्य एक ज्ञानेन्द्र शाही हुन्। उनी मात्र नभई आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला पनि एक हुन्।यी दुई व्यक्तिको नाम प्राय जसो सामाजिक संजाल चलाउनेको लागि अपरिचित व्यक्ति होइनन्। कहिले विभिन्न विषयमा आवाज उठाउदै प’क्राउ पर्दै हि’रा हुँदै आएका यी दुईको चर्तिकला पछिल्लो समय देखिन थलिएको […]
June 20, 2021 June 22, 2021 AdministerLeaveaComment on अभियन्ता ज्वाला,हिमाल र सर्मिला प’क्राउ ! यस्तो छ कारण…दबा’ब स्वरुप सक्दो सेयर गर्नुहोला।
काठमाडौं, सामाजिक अभियन्ताहरु ज्वाला संग्रौला, शर्मिला वाईबा र हिमाल उपाध्याय प’क्रा’उ परेका छन् । आफूमाथि संग्रौला र वाईबाको समूहले प्रहरी हि’रा’सतमै आ’क्र’मण गरेको भन्दै युवा नेतृ खुश्बु घिमिरेले उ’जुरी दिएपछि काठमाडौं प्रहरीले उनीहरुलाई प’क्रा’उ गरेको हो । काठडमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले उनीहरुलाई अ’भ’द्र व्यवहार क’सुरमा प’क्राउ गरिएको रिपोर्टर्स नेपाल डटकमलाई जानकारी दिए । […]
June 17, 2021 June 17, 2021 AdministerLeaveaComment on हे भगवान ! मेलम्ची बजार बन्यो छिनभरमै पानीको ताल । हेर्नुस अहिलेको अवस्था… Share गर्नुहोला।
काठमाडौं, करिब ४ दिन देखि परेको अविरल वर्षासँगै भिषण बा’ढीको चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदिको तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्ष’ति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । घ’ट’नास्थलको हवाई अवलोकन गरेर फर्केका स्थानीय पत्रकार रामचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म नौ जनाको श’व भेटिएको छ भने हेलम्बुदेखि दोलालघाटसम्मका ३०० भन्दा बढि घरहरु डुबानमा परेका छन् । सबैभन्दा बढि […]
June 16, 2021 AdministerLeaveaComment on ३०० घरहरु पुरिए, नौ जनाको श-व भेटियो, ५५ भन्दा बढि अझै बेपत्ता ! बिन्ती छ सेयर गर्नुहोला।
काठमाडौं, हिजो अपरान्हदेखि परेको अविरल वर्षासँगै भिषण बाढीको चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदिको तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । घटनास्थलको हवाई अवलोकन गरेर फर्केका स्थानीय पत्रकार रामचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म नौ जनाको श’व भेटिएको छ भने हेलम्बुदेखि दोलालघाटसम्मका ३०० भन्दा बढि घरहरु डुबानमा परेका छन् । सबैभन्दा बढि क्षति मेलम्ची […]